Izindaba - Log Multi-rip saw saw machine
I-log multi - blade saw ibhekwa njengezinzuzo zokudla okushelelayo, ukucubungula okuhle, akukho blade evuthayo, ukusebenza kahle okuphezulu, okudliwayo okuphansi, ukuphepha nokuvikelwa kwemvelo.Lobu ubuchwepheshe obusebenzayo, obunemba kakhulu futhi obonga izinsiza ucwaningo nezinsiza kusebenza zokucwaninga nentuthuko, ngemuva kweminyaka eminingi yabasebenzi basekhaya bezobuchwepheshe abazinikele ocwaningweni nasekuthuthukisweni, kuyimpumelelo yobuchwepheshe obuphakeme enamalungelo empahla yengqondo.
I-saw eyodwa yama-log multi-chip ingathatha indawo yamasaha amane ebhendi yendabuko. Imishini yamukela isakhiwo esisha kanye nobuchwepheshe obuningi, futhi okuqukethwe kwayo kwezobuchwepheshe kufinyelela ezingeni eliphakeme lomhlaba jikelele. Imishini ingasika izingodo, izingodo eziyingxenye nezinkuni eziyisikwele ngaphakathi kobubanzi obungu-20cm. Yathi isebenza kahle, ngokunemba okuphezulu, ngoba kungaba wokhuni lokusaha phakathi kokucaciswa okuningiliziwe kwebhodi, izinga eliphakeme lokuzenzakalela. ubukhulu be-blade 1.5 1.7 mm, nge-saw blade ejwayelekile uma iqhathaniswa no-2.5 ​​3.0 mm ubukhulu, ukusika umgwaqo wamasaha kunenye imishini yokusaha kwehliswe ngo-46%, kunalokho, izinga lezinto ezibonakalayo lifinyelela kuma-76% kuya ku-80%, amapulangwe ukusetshenziswa izinga cishe ngo-27% ephakeme kunalezo ezinye izinhlobo sawing umshini, futhi ahlabayo inqubo uzinzile, sawing ipuleti ukujiya iyunifomu, ebusweni bushelelezi, iyunifomu bushelelezi ngokunemba high, futhi kunganciphisa isigamu inqubo izinkuni ebusweni kokuqeda.
Ngasikhathi sinye, ngoba amandla aphelele ezimoto aphansi, ukusetshenziswa kwamandla kwedivayisi kuncishiswa ngama-25% kuya kuma-40%.
Kunezinhlobo ezimbili ezinkulu ze-log multi - blade saws: enezingqimba futhi ezimile.Ungayikhetha kanjani i-log multi-blade saw?
Kuya ngephrofayili ofuna ukuyicubungula - uma kuphakathi kokuthatha isikwele, qiniseka ukukhetha ilog evundlile enamakhadi amaningi, ngoba izingodo zamasaha zibheke phezulu, ngakho-ke akunandaba nosayizi wobubanzi log ingathathwa ifakwe Uma kuvulwa zonke izingodo, ungakhetha umugqa oqondile we-multi-slice saw, ngoba i-saw blade isika izingodo ngokuvundlile, inganqunywa.
1. It is ikakhulukazi esetshenziselwa sawing longitudinal ezincane ubukhulu izingodo. Ngokuya ngosayizi osethwe ngaphambilini, amapuleti amaningi angasahawa endaweni eyodwa.
2. Uma kuqhathaniswa ne-saw saw, ukusebenza kahle kwemishini kuphezulu, ukunemba kuphezulu, ukusebenza kulula futhi kulula, futhi izidingo zobuchwepheshe zabahlinzeki aziphezulu, ezakha amaphutha we-band saw machining ukunemba okuphansi, ukusebenza kahle kuphansi, ukusebenza izidingo zobuchwepheshe kuphezulu.
3. I-saw blade ifakwe ngedivayisi yokupholisa, okungelula ukushisa i-saw blade futhi yelula impilo yenkonzo yensimbi yesaha.
4.Umugqa ophindwe kabili wokuphakelwa kwamazinyo abukhali, ukugcinwa okulula nokwezomnotho.
5. Ukuphela kokukhipha kunedivayisi yomhlahlandlela wokuphakela osebenzayo, okungekho lula ukuqinisa i-saw blade futhi kuthuthukise ukushelela kokudla.
6. Umzila wesitimela esiqondisa phambili naphambili nasemuva wesitimela somhlahlandlela webhokisi lokuphotha unikezwa ngamafutha ngepompo yokuthambisa yamandla, elenza isikhathi sokusebenza kwensimbi yomhlahlandlela.
1. Ukulawula nokuhlola iketanga lokondla, ukondla imishini yezinjini kanye nemoto yokuhambisa ngaphakathi kwelogi ye-multi-chip saw njalo.
2. Hlola njalo ukuthi ubude bebhande nokuqina kwenjini enkulu akulingene yini, inkomishi kawoyela yebhokisi kufanele igcwaliswe njalo ngamafutha, nokuthi ipayipi likawoyela amachweba kahle.
3. Isembozo sephedi, isaha lensimbi kanye nekhaba lokuzulazula esikaweni esinamakhadi amaningi kufanele lihlanzwe njalo (izinsuku ezi-3 ~ 5) ngamafutha kadizili, futhi lihlanzwe ngendwangu ehlanzekile. Akufanele kube khona ama-sundries ngesikhathi sokufakwa, bese uhlanzwa ngendwangu.
4. Umgogodla wokuphotha kufanele usetshenziselwe ukufafaza umgodi ngamanzi kanye ngosuku lapho ufaka esikhundleni sesaga se-log multi-chip, noma ushaye isibhamu somoya endaweni okungena kuyo ngaphakathi ukuze uqhume ukungcola futhi uqinisekise ukuthi indawo ebushelelezi iyashelela.
5. Hlola njalo ukuthi ngabe umuthi wokuphotha ngaphakathi kwelogi umshini wezinsalela eziningi awukhululekile yini.
IKhabinethi Yamathuluzi Wokhuni, Izinhlelo Zekhabhinethi Zamathuluzi Wokhuni, CNC Machine Amathuluzi, CNC Bits, Izinsimbi zomzila ze-CNC, Amathuluzi kaRobin Wood,